Angola:Mananontanona ny Ebola, nakatona ny sisintany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Janoary 2009 17:53 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Deutsch, Français, Swahili, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Vokatry ny fipariahan'ny otrik'aretina Ebola any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Congo indray, ny governemanta Angoley dia nanapa-kevitra ny hanidy ny sisin-tany manasaraka ny tany roa tonta ,mba hisakana ilay otrik'aretina mahafaty tsy hiditra any amin'ny faritr'i Angola. izany no nahatonga ny hetsika fifindra-monina nahazatra teo anelanelan'i Luanda Norte (faritany avaratra-atsinanan'ny firenena) sy ny Repoblika Demokratikan'i Congo avy hatrany dia naato. Marihana fa ny faritanin'i Luanda Norte dia toerana fitrandraham-bolamena, toerana mahasintona ny mpiasa mpifindra monina. Nelo de Carvalho [pt] dia manoratra any anatin'ny blaoginy do Nelo Ativado ny momba ny fepetra arahana eny amin'ny sisin-tany ary ny fanamby izay hatrehan'ny Governemanta :
“Filazàna fa tokony hakatona vonjimaika ny sisintany ary tsy tokony hisy olona hiditra na hivoaka ny firenena, hampiasa iny zotra na sisintany iny. Na dia ny moka mpamindra ny aretina dengue aza dia tsy mahazo miditra, fa raha tafiditra, dia ho tsongoina dia. Stratejia fanaon'ankizy izany, mandany ora maro milalao manao miaramila na mpiady anaty akàta, na jeneraly mihitsy aza. Isika izany dia tsy manana fahefana na juridiction afaka hakàna hevitra momba io. Ny azontsika atao fotsiny dia ny mirary soa sy ny manantena fa hizotra ara-dalàna io. Amin'ity fiandohan'ny taona ity,dia mirary soa ho an'ny Angoley, na misy na tsy misy ny ébola.”
Raha ny voalazan'ny sekretera Angoley misahana ny fahasalamana, dia miomana hampandre ny vahoaka ny Governemanta amin'ny drafitra napetraka ho fisorohana ny famelezan'ity otrik'aretina mahery vaika ity. Ny fepetra dia ampiarina, miampy ny any amin'ny faritanin'i Luanda Norte, any Moxico, Malanje, Uige sy Lunda Sul. Nambara fa nisy tranga-na ebola 40, ka 10 mahery tamin'izany no maty tany amin'ny Repoblika Demokratikan'i Conga tao anatin'ny roa volana lasa.
Roa taona lasa izao, mbola tany amin'ny Repoblika Demokratikan'i Congo ihany, tany amin'ny faritanin'i Kasai any andrefana, nahafaty olona 180 eo ho eo ilay otrik'aretina . Ny blaogy Lampeirota dia nitomany ny zava-misy:
“indraindray, miresaka ny aretina ry zareo. Matetika, tsy mieritreritra ny amin'izany aho, mialoka ao aorian'ny fiheverana hoe tsy azo visavisaina ny hamelezan'izany ahy tampoka eo.
Diso izany [fomba fisainana izany] . Androany dia tsy afaka ny hitompo teny fantatra toy izany intsony isika. Mihanaka eny rehetra eny izy ity, ary haigana be.
Malahelo mafy ireo olona tsy maintsy miatrika ity aho.
Tsy ny fahafatesana no atahorako,fa ny làlana mitondra mankany“
Raha ny voalazan'ny solontenen'ny OMS [WHO] any Angola, Diosdado Nsue-Micawg, dia ahiany ho ny fikirakirana ny fatin'ireo rajako maty tany anaty ala kongoley no mety nampifoha indray ny aretina. Na dia ifaliana aza fa tsy mbola nisy mihitsy trangan'i Ebola tany Angola, ny seketeram-panjakàna misahana ny fahasalamana dia nanambara fa vonona hiatrika izay zavatra mety hitranga rehetra ny firenena noho ny traikefa efa ananany taorian'ny tazo maherin'i Marburg izay mitarika fahaverezan-drà, otrik'aretina mahery vaika toy ny Ebola..
Faninefany amin'ny nielezan'ny otrik'aretina ebola teto amin'ny RD Congo ity, hatramin'ny niandohany tany amin'ny 1976 tany. Izy ity dia aretina tena mahery tokoa mitarika hafanana be, fandoavana, ny fivalànana ary ny fahaverezan-drà anatiny sy ivelany. Tamin'ny 2005, olona 329 no matin'ny Marburg tany amin'ny tanànan'i Uige, andrefan'i Angola, manamorona indrindra ny sisin-tanin'ny Repoblika Demokratikan'i Congo.
Sary avy amin'ny mikroskopy elektronika à balayage maneho ny filovorus ARN,izay mahatonga ny fièvre hemorragique Ebola. Photo courtesy CDC/Cynthia Goldsmith. mpampiasa Flickr hukuzatuna